Maraoka: Hajj sy Vodka, Fez ilay Fifanolanan’ny Fotoana, Ary Ireo Antony Folo Voalohany Hanivanan’ny Maraoka Telecom · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 16:12 GMT
Na efa nihena aza ny ankamaroan'ireo lahatsoratra mikasika sy sivana taorian'ny fanivanan'ny Youtube, mbola velona tsara any anatin'ny bilaogy maraokana ilay lohahevitra. Mihiaka ilay blaogera Marokana xoussef (fr/en) hoe:
Nanomboka tamin'ny afak'omaly, indraindray azo idirana ny Livejournal, indraindray voasivana. Etsy andaniny kosa, miverina ho azo idirana malalaka ny Google Earth… Mandra-pahoviana?!
Raha ny zava-misy, nanao lisitr'ireo antony ”Folo Voalohany” mahatonga ny Maraoka Telecom hanivana ny fidirana ao amin'ny Livejournal sy ny Google Maps ny MoTIC (fr). Ilay lisitra, misy ny antsipirihany eto, dia ahitana:
Antony n°10: noho ny fangatahan'ny MAP* no anaovan'ny Maraoka Telecom izany, satria mihevitra ity sampan-draharaha ity fa manararaotra ny lazany amin'ny fiantsoana ny tolotra omeny ho Google MAPs izy.
*MAP na Maghreb Arabe Presse dia gazety ambany fitantanan'ny fanjakana ao Maraoka, afaka jerena amin'ny aterineto amin'ny teny Arabo, Frantsay, ary Anglisy.
Antony n°9: Ao anatin'ny rafitry ny fanavaozana ataon'ny fitondrana maraokana, voasafidy ho fitaovana vaovao ho an'ireo mqadems izay tsy ho ela dia hanana solosaina azo entina tanana ny Google Earth. Tsy azo eritreretina mihitsy ny hamela ny vahoaka hahazo fitaovan'ny fitondrana.
*Ny mqadem dia olona iray izay ny asany dia mitatitra ny zava-mitranga eo amin'ny manodidina ny toerana onenany amin'ny manam-pahefana, ary manala tsiny ny zavatra tahàka izany, toy ny zaridaina vaovao ao amin'ny mpifanolo-bodirindrina. Afaka manome taratasy fanamarinana ihany koa izy raha misy fangatahana izany hanaporofoana hoe efa nipetraka teny amin'ny manodidina ny olona iray.
Antony n°7: Noho ny fangatahan'ny Ministeran'ny Fanabeazana no anaovan'ny Maroc Telecom izany satria tsy manana ny fanomezandalana avy amin'ny ministera hanome fampianarana jeografia ilay mpandraharaha.
Tsy Maroc Telecom irery ihany no nokendren'ireo vazivazy tamin'iny herinandro iny. Diso famindra tamin'iny herinandro iny ny La Vie Economique, gazetiboky Maraokana mpivoaka isankerinandro, voatahirin'i Laila Lalami tao anatina lahatsoratra mampihomehy:
Tao anatin'izay taona vitsivitsy izay, nihoatra lavitra noho ny fetra napetraky ny Saodiana ny fangatahana taratasy nataon'ny Maraokana mba hivoahana mankany Lameka hanao ny fivahinianana masina Hajj, ka voatery nametraka loteria ho an'ireo mpivahiny manaraka ny fanjakana. Mpangataka mihoatra ny 32.000 no hanana vintana hahazo iray amin'ireo toerana miisa 7.700. Ny vaovao toy izao, mazava ho azy, dia lasa lohateny ao an-toerana, toy ny hitanao avy amin'ity sarin'ny La Vie Economique ity. Ankehitriny dia mariho kosa ny dokambarotra miaraka amin'ilay lahatsoratra.
Nilaza i Larbi, izay nizara ilay sary tamin'ny voalohany:
Mbola mijanona ao amin'ny ara-panahy foana isika.Sarin'ny La Vie Eco, gazetiboky Maraokana mivoaka isankerinandro, navoaka tamin'ny herinandro lasa teo. Amy nahazo anjara ny rehetra !
Nanadihady ny media tamin'iny herinandro iny ihany koa ny Everything Morocco, mitsikera ireo mpanao gazety izay nisafidy ny hahita an'i Maraoka hiato ara-potoana. Mendrika hovakiana ilay lahatsoratra manontolo, fa ity fehezanteny notsongaina manokana ity no tena niavaka:
Tena tafalatsaka ao anatina fifanolanana fotoana azon'ny olona hidirana sy hivoahana amin'ny sitrapony marina i Fez ary izany no zava-manintona goavana – mipetraka ao anatin'ny zavatra toy ny erana hafa sa tontolo iainana mirazotra ve izy io?
Ny blaogy farany tamin'ny fitetezana tamin'iny herinandro iny dia El Hafa, izay mizara amintsika, vaovao avy amin'ny Virgin Galactic, ”tsipika” vaovaon'ny Virgin Atlantic. Milaza ilay blaogera:
Afaka mamandrika ny sidinao mankany an'habakabaka avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Virgin Galactic fotsiny ianao. Ny zavatra ilainao dia 200.000 dolara ary petrabola azo averina farafahakeliny mitentina 20.000 dolara. Mikasa ny handefa ny mpanamoriny voalohany ny Virgin Galactic any amin'ny 2009 any. Efa nanao ny famandrihana toerana i Brad Pitt sy Angelina Jolie.
Na i Paris Hilton aza mikasa ny handeha koa.. tsy haiko raha hoentiny miaraka aminy koa ny alikany mandritra io fotoana io….tsy fantatrao mihitsy…
Ny nanolotra ny sary dia i Larbi, izay nanao ‘scan’ izany avy tao amin'ny La Vie Economique.